Barakac ka socda magaalada Afrin ee dalka Suuriya - BBC News Somali
Barakac ka socda magaalada Afrin ee dalka Suuriya
17 Maarso 2018
Wararku waxay sheegayaan in shacabka halkaasi ku dhaqan ay wajahayaan biyo iyo koronta la'aan ba'an, waxaa gabaabsi sii noqonaya cunnada.
Shacabka ku nool magaalada Afriin iyo hay'ad u ololeysa arrimaha xaquuqul insaanka reer Suuriya oo fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegaya in 16 qof ay ku dhinteen duqeymo diiyaaradaha dagaalka ee dalka Turkiga ay u geysteen isbitaalka ugu weyn magaaladaasi.
Haseyeeshe Turkiga ayaa arrintaasi beeninaya, waxaana saraakiishu Turkiga ay sheegayaan in aysan dad rayid ah dhibaato u geysan tan iyo markii ay hawlgalka milatari ka billaabeen gobolkaasi muddo haatan laba bilood laga joogo.
Xaaladda ba'an ee hadda ka jirta gudaha magaalada Afrin iyo wararka sheegaya in dad rayid ah la dhibaateeyay ayaa keenay in wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska uu dhaliilo hawlgalka Turkiga oo uu ku tilmaamay mid aan loo qiil dayi karin.
Sidoo kale baarlamaanka reer Yurub ayaa dowladda Turkiga ugu baaqay in ay joojiso hawlgalkaasi milatari ee ay ka waddo gobolkaasi.
Turkiga ayaa u muuqda in uu doonayo in gebi ahaanba uu go'doomiyo magaalada Afrin, ka hor inta uusan billaabin in uu cagta mariyo maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee halkaasi maamula.
Madaxweyne Erdogan ayaa ku gacan seyray dhaliilaha iyo digniinaha caalamka ka soo yeeraya, waxa uuna ku adkeystay in dalkiisa uu u dhaqmayo si waafqsan qawaaniinta caalamiga ah oo ah in uu waxa uu ku tilmaamay argagixisada ka difaacdo xudduudihiisa.
Waxa uu ballan qaaday in uu ballaarin doono hawlgalkaasi oo uu beegsan doono dhul hor leh oo ay maamusho kooxda Kurdiyiinta ee YPG oo uu ku eedeeyay in ay xiriir la leedahay fallaagada PKK eek a dagaalanta gudaha dalka Turkiga.
Qiyaastii 50,000 oo qof oo rayid ah ayaa ka barakacay magaalada Afrin iyo tuulooyinka ku hareereysan.
Horraantii bishan ayaa kolonyo baabuur ah oo sida gurmad bini'aadamtinimo waxa ay gaareen waqooyiga bari ee gobolkani Afrin, waxaana ujeedadu ahayd in dadka halkaasi ku tabaaleysan la gaarsiiyo gargaarka bani'aadanimo ee ay u baahan yihiin.